Mifampiandry an-kendritohana, ka ny aza mba tratra ihany. Tsy misy arofanina ara-politika intsony eto, fa ny sary hita sy miharihary dia ny hoe: manao ny ataony izao eo amin’ny fitondrana: managadra, mamoritra, manao afera, mangoron-karena,… Tsy hoe manenjika ary mandeha am-pahamarinana fa manao ny ataony ihany koa. Tsy miraharaha izay mety ho fitsimbadihan-drasa any aoriana, ny anio aloha no fantatray,… Tsy dia misy eto amintsika intsony ny foto-pisainana hoe: ny ratsy atao loza miantona, fa soa atao levenam-vola. Mamely izay voany aloha ny eo amin’ny fahefana, mandrapaka izay azony arapaka, mamoritra izay azo foretina,… Ny resaka fisaraham-pahefana tsy misy intsony, fa dia tena ampiasaina amin’ny tombotsoa politika. Taiza no mbola nisy hoe ny didim-pitsarana tsy mbola mivoaka, kanefa ny filoha andrim-panjakana mpitsara iray, dia efa nilaza fa tsy hisy fiantraikany amin’ny zava-kinasan’ny ankilany ny fitorian’ny andaniny ? Zary lasa adihevitra io amin’izao fotoana izao, ary misy ny mandika azy ho toy ny hoe: mbola tsy mivoaka ny didim-pitsarana, ary ilay mpitsara mandray an-tànana ny raharaha no miteny amin’ny mpitory hoe tsy hisy fiatraikany amin’io olona torianao io ny fitoriana. Efa fandrosoana kitay sy fandraharana solika amin’ny afo efa mirehitra ireny. Ny sary aseho ankehitriny, mba hamiliana ny sain’ny maro dia ny hoe miasa, mitsinjo vahoaka,… Ny mihoby ny mpanao politika amin'ny fampiasana ny volam-panjakana anefa dia toy ny mitehaka amin'ireny milina harifomba amin'ny banky rehefa izy mamoaka vola amin’ny fotoana hakanao ny karamanao.